Global Voices teny Malagasy » Pakistan: Karachi eo ambanin’ny fanafihana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Mey 2018 3:42 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika
Faravodilanitr'i Karachi. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Kashiff. Used under a Creative Commons License
Tamin'ny 5 Febroary 2010, fipoahana baomba vy very ny ainy roa no namely ny tanàna metropolitana Karachi  ka namoizina ain'olona 15 sy naharatrana 70. Nikendry indrindra ireo mpisaona Shiita nandeha namonjy ny Muharram ny fanafihana voalohany. Nitranga tao ivelan'ny sampana vonjimaika tao amin'ny hôpitaly Jinnah, izay namindràna ny naratra ny fipoahana faharoa. Niseho 40 andro taorian'ny daroka baomba tao Ashura izay nahafaty olona 40 mahery ny fanafihana. Indrisy, nanana tantara momba ny herisetra eo amin'ny foko sy fivavahana i Karachi.
Tao amin'ny bilaogiko manokana nampahatsiahy sy niampanga  ny fiverenan'ny herisetra ao Karachi aho:
Taorian'ny fanaovana viveriniainy nanapoaka baomba ny tenany tamin'ny alatsinainy – ny fielezan'ny rotaka sy ny fandoroana no manamarika ny karazana valinteny sy ny fanimban-javatra taorian'ny fanafihana ara-pivavahana. Fotoana fohy taorian'ny fipoahana, nipoaka tany amin'ny faritra maro tao an-tanàna ny korontana. Toa tsy nisy mihitsy ny fanaraha-maso nataon'ny mpitandro filaminana tamin'izany manoloana ireo zavatra simba. Vokatr'izany, toeram-pivarotana an-jatony no nisy nandoro, ary nisy fotoana tamin'ny alatsinainy alina, toa saika tratry ny loza ihany koa ny fihariana manontolo tao amin'ny distrika. Matetika arahana fihenjanana goavana ny fanafihana toy izany. Raha mitohy ny rotaka, maro ireo fanontaniana nitsangana mikasika ny anjara asan'ny mpitandro filaminana sy ny tsy fahitana azy ireo satria mbola miely patrana ny fanimban-javatra. Mazava fa tsy mikendry antokom-pivavahana iray manokana ny fanafihana. Fanafihana hampihorohoroana ny vahoakan'i Karachi sy hampihitsoka azy ireo ao anaty ady izany, ka manimba ny ivon-toekarena ao amin'ny firenena.
Kalsoom Lakhani ao amin'ny CHUP – Changing Up Pakistan  nanameloka ireo andiam-panafihana ny Miozolomana Shiita, ary nanontany ny toetran'ny fampanjakana ny lalàna sy ny filaminana ao amin'ny firenena:
Mety tsy matoky tanteraka isika hoe iza no tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana androany, nefa mahatsiravina ihany fa mety hitranga amin'ny rehetra izany. Raha samy natao fanairana mena avokoa ny tanàna telo omaly, tsy ho maro ve ny zavatra azo atao mba hisorohana ny fahafatesana androany? Tsy mampahonena fotsiny ny fikendrena ireo mpivahiny masina Shiita sy ny hôpitaly, fa am-pahatsorana, mankararirary ihany koa. Mbola misy toerana ve eto Pakistan ka voaaro tsy voakasika?
Tamin'ny lahatsoratra iray feno  teo aloha tao amin'ny bilaogy, nanome fanazavana momba ny tantaran'ny herisetra ao Karachi i Kalsoom. Araka ny voalazan'i Dawn,  olona 34 mahery no namoy ny ainy tamin'ny herisetra ara-poko tao amin'ny faritra samihafa tao an-tanàna tamin'ny volana aprily tamin'ny herintaona. Natahotra ny vahoaka amin'ny ankapobeny noho ny herisetra miely patrana sy ny tsy fahafahan'ny manam-pahefana mifehy ny zava-misy.
Tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Onjam-pamonoana mikendry vondrona manokana ao Karachi (Unabated wave of target-killing at Karachi)’, bilaogera hafa, Farheen Ali, nizara ny ahiahiny manoloana ny toe-javatra miharatsy ao an-tanàna sy ny tsy fihetsehan'ny manampahefana.
Taorian'ny herisetra, napetraky ny governemanta manerana ny Tanànan'i Orangi ny fizarana 144. Ary taorian ‘ny fametrahana ny fizarana, mahatsiaro afaka amin'ny andraikitra sy ny fanomezan-tsiny rehetra ny governemanta.
Mangataka i Adil Najam ao amin'ny All Things Pakistan  fa tokony apetraka ho faritra tsy misy fitaovam-piadiana i Karachi:
Na dia manerana ny firenena aza ny herisetra amin'ny endriny rehetra, ary na dia eo aza ny herisetra vao haingana, mitaky an'i Karachi mba ho “faritra tsy misy fitaovam-piadiana” (ara-drariny) ireo mpanao politika avy amin'ny antoko rehetra, toa hita fa sahirana mizara fahazoan-dalana amin'ireo karazana fitaovam-piadiana voaràra tahaka ny hoe vatomamy ho an'ny ankizy ireo mpanao politika sy ny parlemantera avy amin'ny antoko rehetra.
Raha mandinika ny korontana vao haingana tany Karachi, mila mandray andraikitra avy hatrany ny governemanta mba hamaranana ny herisetra. Na izany aza, araka ny voalazan'ny vaovao , sahirana mametraka ady anatiny ny manampahefana fa tsy mba mamaha ireo olana lehibe.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/18/119607/
 fipoahana baomba vy very ny ainy roa no namely ny tanàna metropolitana Karachi: http://bit.ly/cs57Ns
 daroka baomba tao Ashura : http://news.smh.com.au/breaking-news-world/suicide-bomber-kills-20-at-pakistan-ashura-parade-20091229-lhhg.html
 nampahatsiahy sy niampanga: http://sanasaleem.com/2009/12/30/terror-strikes-home-again/
 CHUP – Changing Up Pakistan: http://changinguppakistan.wordpress.com/2010/02/05/stay-safe-karachi/
 ‘Onjam-pamonoana mikendry vondrona manokana ao Karachi (Unabated wave of target-killing at Karachi)’, : http://farheenali.wordpress.com/2010/02/02/unabated-wave-of-target-killing-at-karachi/
 All Things Pakistan: http://pakistaniat.com/2010/01/14/weapon-liscences-prohibited/